Sabboontonni Oromoonaannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal irraa qabaman Manni Murtii Olaanaa Dhaddacha 19ffaa dhaddacha guyyaa 25/1/2018 (17/5/2010 A.L.Htti) ooleen ammas beellamaan mana hidhaatti deebise. | QEERROO
Sabboontonni Oromoo Matakkal kuni qabeenyaa fi Dinagdeen warra sadarkaa gaariirra jiran, Qabiyyee lafaa gaashaa qaban, Hubannoo siyaasaa gaarii kan qabaniifi hojii Mootummaa fi Miti-Mootummaa adda addaa keessaa hojjetan lafa jiranii adamsamanii mana hidhaatti erga darbamanii waggaa darbe. Kunis sababii Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatu gaaffii mirgaa gaafateefi karoora Saamichaa Mootummaan wayyaanee qabeenya Uumamaa naannichaa saamuuf karoorfate danqaa akka hin taaneef jecha.
Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul jiraatu waggoota dheeraaf Mirga afaaniin barachuu dhabuun, Mirga aadaa ofii kabajuu dhabuu fi mirga abbaa biyyummaa dhabuun naannichatti akka lammii lammaffaatti lakkaa’amaa tureera. Mootummaan Wayyaanees waggoota dheeraaf saboota naannichaa garaagaraa wajjin walitti buusaa, Hidhaa, Ajjeesaa fi Qe’ee fi qabeenya isaairraa buqqisaa akka ture seenaan ni dubbata. Hacuuccaa fi duguuggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru irraan kanka’e lakkoofsi Uummata Oromoo naannichaa walakkaa gahu waggootii kurnan lamaan daban keessatti gadihir’isaa dhufeera.
Mootummaan wayyaanees Hidhaa Guddichaa laga Abbayyaa fi Qabeenya uumamaa naannichaa kanneen akka warqee, Albuudaa fi kanneen biroo Dhalattoota Tigiree, Aangawoota TPLF fi jala deemtotashee wajjin weeraranii saamuuf Qabsoo dhalattoota Oromoo naannichaa ukkaamsuu fi uummata Oromoo naannichaas saboota naannichaa biroo wajjin walitti buusuun akkuma Oromoota naannoo Sumaalee Buqqisuun karoora jalqabaa ture. Saba Amaaraa naannichaa immoo rakkoo walfakkaatuuf saaxiluun naannoo Beenishaangul Biyyoomfachuun immoo karoora wayyaanee isa lammaffaa ture.
Kanaaf jecha Sabboontota Oromoo qaqqaalii mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kanarratti ragaa barbaacha oliif gadi kaattus Saboonni biroon naannicha jiraatan irratti ragaa ta’uu diduunaan tummaa fi kabajaUummata Oromoo naannichaaf qaban mul’isaniiru. Haata’uyyuu malee Abbaan alangee ragaa namaa fidanna jechuun beellama yeroo sadaffaa beellamsiisuun deddeebisaa jirti.
Qabsoo uummata Oromoo afaaniin sossobuun Bishaan itti naquu kanmi’eeffate Mootommaan naannoo Oromiyaas gaaffii Uummata Oromoo naannichaa kan deebisu fakkeessuun, Hariiroo obbolummaa naannichaa cimsina jechuun sobaan qabsoo Uummata Oromoo naannichaa duubatti harkisaa jiru. Uummanni Oromoo Naannichaa saboota biroo naannichaa wajjin waggoota dheeraaf wal kabajuu fi waldanda’uun jiraachaa turee fi jiru hariiroo obbolummaa cimsina jechuun afaanfaajjessuun deebiita’uu hin danda’u. Rakkoon amma Uummata Oromoo naannoo Beenishaangul mudate rakkoo obbolummaa utuu hin taane rakkoo siyaasaati. Kunis gaaffii uummataa kanneen akka Hidhamtoota hiikuu, gaaffilee Bu’uuraa gaafataman ukkaamsuuf jechatarkaanfii fudhatamanii fi shira mootummaan TPLF xaxaa jirtu dhaabsisuu dha.
Kanaafuu, malee, Uummanni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz Jiraatu ejjennoo kanaa gadii baafatee Qabsoo itti fufee jira:
Shirriifi Diinummaan TPLF walirraa hin cinne Uummata Oromoo naannichaa irratti raawwachaa jiru Qabsoo Uummata Oromoo naannichaa duubatti deebisuu hin danda’u;
Sabboontonnii fi dhalattoonni Oromoo naannoo Beenishaangul Gumuz-Godina Matakkal raga tokko malee mana hidhaa keessatti rakkachaa fi Hiraarfamaa jiran haal duree tokko malee nuuf haa gadhiifaman;
Mirgi afaaniin barachuu nuuf haakabajamu;
Saboonni Naannoo Beenishaangul Gumuz jiraatan hundi nuuf Obboloota keenya, Shira mootummaan wayyaanee Uummata Oromoof Uummata Shinaashaa, Gumuz, Bartaa fi kanneen biro wajjin walitti buusuuf xaxaa jirtu Mormuun Qabsoo Uummata Oromoo cinaa akka dhaabbatan waamicha goona;
Gaaffiin Mirga abbaa Biyyumaa Guutummaa Oromiyaa Nuufis gaaffiidha; hanga Gaaffiin Uummata Oromoo deebi’utti Qabsoon keenya ittifufa.